Ny Maso Mibanjina Ny Ho Avin’i Shina, Mihantsy Fisamborana Ireo Avy Ao Amin’ny Tanibe Mba Hanohanana Ny Revolisionan’ny Elo Any Hong Kong. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2014 2:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , Français, 한국어, English
Tamin'ny alalan'ny famoahana sary miaraka amin'ny hafatra maneho firaisan-kina tao amin'ny mediam-bahoaka, naneho ny fanohanan'izy ireo ny mpanohitra miaro ny demokrasia ao Hong Kong ireo mpampiasa aterineto avy ao amin'ny tanibe Shina. Sary nalaina avy ao amin'ny pejy Facebook “Mainland Supporters”
Nodinganin'ireo mpikatroka mafàna fo ao Shina ny sivana ary mananontanona azy ireo ny fisamborana noho ny fanambaràny ampahibemaso ny fanohanan'izy ireo ny mpitolona mpomba ny demokrasia any Hong Kong.
Olona 34 farafahakeliny no voasambotra tamin'ny 6 oktobra, ka fito tamin'izy ireo no mpanakanto avy ao amin'ny foiben-javakanto Sonzhuang ao Beijing. Taorian'ny 22 Septambra nanaovan'ireo mpianatra ao Hong Kong fanaovana ankivy tao am-pianarana mba ho fangatahana fifidianana ara-demokratika no nanomboka ireo fisamborana.
Nilasy sy nanao fitorevahana goavana tao amin'ny distrika manan-karena ao Hong Kong nandritra ny herinandro mahery ireo mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana, hitakiana amin'i Shina mba hisintonany ny fitakiany hoe kaomity mpanendry izay mpomba an'i Beijing no maro ao anatiny no misafidy ny kandidà amin'ny fifidianana izay hirotsaka hofidiana ho lehiben'ny mpanatanteraky ny tanàna manaraka eo. Mba hanakànana ny vaovao momba ny hetsika miandany amin'ny demokrasia, nantsoina hoe “Occupy Central” , tsy hiparitaka any amin'ny tanibe Shina, niharan'ny sivana mahery vaika momba izany ireo mediam-bahoaka, tao anatin'izany ny seha-pifandraisan'ny vahoaka: WeChat sy Sina Weibo.
Nanaitra ireo nàmany tao amin'ny Twitter i Wang Pen tamin'ny fisamborana ny pôeta Wang Zhang, ka ni-bitsika ny sarin'ilay pôeta eo anoloan'ny sainam-pirenenan'i Taiwan sy maneho ny fanohanany an'ilay “revolisionan'ny elo” ao Hong Kong:
Miangavy anareo mba saino kely! Nosamborin'ireo manampahefana tamin'ny 11 ora alina teo ho eo ny pôeta Wang Zhang ny voalohan'ny 1 Oktobra noho ny hafanàm-pony sy ny fanohanany an'i Hong Kong vao haingana. Mpitandro filaminana sy mpiambina ny filaminam-bahoaka teo amin'ny 6 na 7 teo no niditra an-keriny tao amin'ny tranony ny 2 Oktobra tamin'ny 7 ora maraina. Tsy tratra antso izy nandritra ny 24 ora mahery.
Vay iray marary ho an'ny Antoko Kaominista Sinoa ao amin'ny kaontinanta i Taiwan, izay tsy mankatò ny fahaleovantenan'ilay nosy demokratika. Faritany tantanan'i Sina manokana i Hong Kong na dia misitraka ny velon-tena (fahavitàn-tena) avy amin'i Sina aza , mifanohitra amin'i Taiwan izay faripiadidiana manokan'i Shina. Manamarina ireo manampahefana ao Shina fa tokony atao ho ohatra ho an'ny fampihavanana an'i Taiwan amin'i Shina ilay hoe “firenena iray, fitondrana roa” ampiharina ao Hong Kong. Fampitandremana ho an'ireo mponina ao Taiwan ilay tsy fahombiazana amin'ny fametrahana fitondrana tena ara-demokratika ao Hong Kong manoloana ny fifandraisana akaiky amin'i Shina.
Fa maninona ny tanibe Shina no mirisika haneho fanohanana ny tolona hisian'ny demokrasia ao Hong Kong? Nanazava ny antony ireo mpitantana ny “Support Across the Border”, pejy Facebook iray izay natokana ho fanaparitahana ireo vaovao momba ny “Occupy Central” any Shina, ary mandefa hafatra fanohanana avy any Shina mankao Hong Kong:
Nanontany ireo olona, amin'ny maha-mponina ao amin'ny tanibe Shina ahy, hoe matahotra ve aho. Tsy namaly aho, fa raha ny marina, mivarahontsana aho. Vao teo, nanonofy aho hoe voasambotra tao ambadiky ny rindrina ny ray aman-dreniko [izany hoe Shina]. Matahotra loatra aho. Kanefa inona àry?
Tsy manakana ahy amin'ny fijoroako ho an'i Hong Kong anefa izany tahotro izany. Tsy hamono ny faherezako hitadiavana ny marina izany ary hihetsika miaraka amin'ny feon'ny fieritreretako izay teraka tato amiko […]
Any amin'ny lafy iray amin'ilay rindrina, miditra any amin'ireo sisin-dalana rehetra ny fampielezan-kevitra momba ny fiarahamonina mirindra, raha fiainana hafa mihitsy no eny amin'ny rindrina sy ny fefy misy herinaratra, eny ireo mponina ao Hong Kong no mihira mafy ho an'ny demokrasia sy ny fahamarinana.
Tao anatin'ny firesahana tamin'ireo mponina ao Hong Kong, nomarihan'ny iray tamin'ireo mpitantana ilay pejy ny lanjan'ny fandrosoana ara-demokratikan'i Hong Kong manoloana an'i Shina :
Tsy olan'ireo mpianatra ao Hong Kong fotsiny ny amin'io. Tsy olan'ireo mponina ao Hong Kong fotsiny io. Olana nasiônaly sy iraisam-pirenena izy io. Fanovàna ho amin'ny demokrasia sy ny fahafahana io. […] Tsy izahay avy any amin'ny tanibe monina aty Hong Kong ihany, fa ireo olona any amin'ny tanibe Shina ihany koa, toerana izay anakànan'ilay Rindrina Lehibe ny vaovao, no manandrana mampiasa hevitra samihafa mba hahitàna làlana hivoahana, sy mba hamoahana ireo vaovao. Miasa saina momba izay mitranga any amin'ilay elodrano kely sy ireo vohitra kely izy ireo. Vonona ny hampiasa, na efa nampiasa, hevitra maro izy ireo mba hiadiana amin'ilay fitondrana manao didy jadona, am-pilaminana sy amim-pikirizana.
Naneho ny fanohanany ireo mpiandany amin'ny demokrasia ao Hong Kong tamin'ny alalan'ny twitter ihany koa ireo mponina avy any amin'ny tanibe Shina. Nazavain'i IsaacMao, blaogera malaza be ao Shina,ho an'ireo namany ny antony ilàn'i Hong Kong ny demokrasia:
@Andrew_920626 Akaiky ny ivon-toerana mpaninjara zavatra maneran-tany i Hong Kong. Mety ho ivon-toerana sy ho ohatra ho an'ireo tanàna hafa ao amin'ny tanobe Shina i Hong Kong raha vitantsika ny mitazona mba hahomby ny fahalalahany ara-toekarena sy ny rafi-pitsaràny. Ilaina ny fomba ara-demokratika mba hamahàna ireo olana ao amin'io fiarahamonina io, indrindra fa ny tsy fitovian'ireo manan-karena sy ireo mahantra ao amin'io tanàna io. Manaraka izany, hanana fahafahana hanangana orinasa vaovao ireo tanora. Tsy mila mitolona hanaraka ireo lalàna antitra ao amin'io fiarahamonina io intsony izy ireo. Hatanjaka kokoa izy ireo.
Manantena i @guinaigu fa ho maodely ho an'ny demokrasia ao Shina i Hong Kong:
Avy any Guangdong aho. Manantena aho hisy setriny mahafapo ny #OccupyCentral. Manohana ny hetsi-panoheran'ireo mpianatra aho. Raha mandresy ny mpitolona ao Hong Kong, dia hanana demokrasia manerana ny tanibe Shina manontolo isika.
Nohazavain'ny mpitantana iray ao amin'ilay pejy facebook “Support Across the Border”, izay mahatsapa faneriterena, fa enta-mavesatra ho an'ny hetsika miandany amin'ny demokrasia ao Hong Kong ilay hevitra hoe lasa maodely ho an'ny fivoaran'ny demokrasia amin'ny ho avy ao Shina i Hong Kong:
Amiko, tsy i Hong Kong ihany no voakitik'io fanoherana io fa manana fahafahana hikitika ny fandrosoan'ny demokrasia ao amin'ny tanibe Shina ihany koa izany. Mbola manana fahalalahana miteny ny mponina ao Hong Kong, fahalalahan'ny gazety, sy fahalalahana mivory, ary malàky noho ny an'ireo ao amin'ny tanibe ny fandehan'izy ireo mankany amin'ny demokrasia. Mety ho ampiasain'ny Kaongresy Nasiônalin'ny Vahoaka ho toy ny ohatra i Hong Kong mba hametrahana io rafi-pifidianana mitanila io any amin'ireo tanàna hafa rehetra ao amin'ny tanibe Shina raha toa ka manaraka ny fanapahan-kevitry ny Kaongresy Nasiônalin'ny Vahoaka ka mampiroborobo io rafi-pifidianana mitanila io.